Najanon'i Sipra ny programa Golden Passport
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Sipra » Najanon'i Sipra ny programa Golden Passport
Oktobra 13, 2020
Sipra Nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra ny hampiato ny programa Golden Passport izay manome zom-pirenena Sipra ho an'ireo vahiny manankarena izay mampiasa vola amin'ny harinkarenan'ilay nosy.
Ny governemanta Cypriot dia nanapa-kevitra tamin'ny fivoriana vonjy maika, mifanohitra amin'ny fanararaotana ireo fepetra voalaza ao amin'ny rafitra fampiasam-bola. Nambara fa ny famoahana ny zom-pirenena-ho-fampiasam-bola dia hatsahatra manomboka amin'ny 1 Novambra amin'ity taona ity.
Talohan'izay dia fantatra momba ny fanapaha-kevitr'i Sipra hanafoanana ny zom-pirenenan'olona fito izay nahazo "pasipaoro volamena" ho takalon'ny famatsiam-bola amin'ny toekarem-panjakana.
Ny programa Golden Passport dia natolotr'i Sipra tamin'ny 2014, raha tao anatin'ny fitotonganan-karena lalina ny harinkarem-pirenena. Ka tamin'ny faran'ny taona 2018, ambanin'ity programa ity, vahiny efatra hetsy no nahazo zom-pirenena cypriot, izay nanambola vola mitentina 6 miliara euro ho an'ny harinkarem-panjakana.
Tamin'ity fararano ity dia nanao fanadihadiana ny mpanao gazety avy amin'ny fantsom-pahitalavitra Qatari Al Jazeera ary nahita fa i Sipra dia lasa fialofana ho an'ny sangany eran'izao tontolo izao, izay miteraka loza mitatao ho an'ny filaminan'ny eropeana.
Mikasika izany, ny sampan-draharaha misahana ny lalàna eto amin'ny nosy dia nanome baiko ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna eo an-toerana mba hanomboka ny famotopotorana ireo mety ho fandikan-dalàna amin'ny famoahana “pasipaoro volamena”.
Manamarina vaovao momba ny olom-pirenena 42 ny polisy izay, raha ny fanadihadiana natao, dia tafiditra ao anatin'ny “vondrona atahorana mafy”.
Ny superstar Juventus Cristiano Ronaldo dia nizaha toetra tsara tamin'ny COVID-19
ETOA Tom Jenkins: Ny filankevitry ny minisitra dia nametraka ny fepetra fitsangantsanganana eropeana